Soo-saaraha heerkulka dareeraha Shiinaha Power Power Tayada Sheeg - Testeck Co., Ltd.
Hoyga > Alaabada > Dareeraha heerkulka dareeraha
1. dareemayaal heerkulka Powerstation waxaa loo isticmaalaa cabbirka heerkulka ee qaybaha kala duwan ee koronto-dhaliyeyaasha (sida hage sare dhalista baadiyaha, riix burka, hage hoose dhalista baadiyaha, hagaha biyaha dhalista baadiyaha, hawo / hawo kulul, biyo, dhuumaha saliidda, cabbirka heerkulka stator ).
2. Waxaan u habeyn karnaa si waafaqsan shuruudaha macaamilka, iyadoo la adeegsanaayo qaabab dhismeedyo macquul ah oo kala duwan oo munaasabado kala duwan leh, lana isticmaalayo jajabyo tayo sare leh. Tiknoolajiyadda laserwelding-ka waxaa loo adeegsadaa in looga hortago kala-goysyada alxanku inay kala-baxaan ama ku dhacaan munaasabadaha gariirka, taas oo si wax ku ool ah u hagaajinaysa xasilloonida cabirka
Isku dhafan sameynta dareeraha heerkulka stator
Heerkulka sare iyo cadaadiska sare ee isku dhafan sameynta dareeraha heerkulka ayaa badanaa loo isticmaalaa in lagu cabbiro heerkulka stator ee matoorrada waaweyn iyo kuwa dhexdhexaadka ah. Iyada oo ku saleysan curiyaha cabbiraadda heerkulka thermistor ee mashiinka, tiknoolajiyada farsamaynta qalabka wax lagu nadiifiyo ayaa loo isticmaalaa in lagu farsameeyo qafisyada filinka daboolaya ee qaababka kala duwan, iyo tikniyoolajiyadda patent ee isku dhafka heerkulka sare iyo cadaadiska sare waxaa loo adeegsadaa hal mar sameysmo.
Nooca Chip shidma dareeraha heerkulka
Nooca Chip-ka ee dareeraha heerkulka stator (T2010Pt100-100-5-3200 / 01) wuxuu leeyahay kor u kac heer kulka yar iyo cabirka heerkulka lagu kalsoon yahay. Cunsurka dareemaya heerkulka wuxuu ku fidaa inta badan dhererka jirka dareenka si uu u bixiyo celceliska aqrinta heerkulka aagga cabbirka heerkulka. Tani waxay ka hortageysaa halista in dareeraha heerkulka dhibic uu seego barta kulul ee deegaanka.
Stator fuuli jiray RTD
Stator winding RTD (TW2010Pt100-100-2-3104 / 00F200 / X2) waxay leedahay kor u kac heer kulka yar iyo cabirka heerkulka lagu kalsoonaan karo. Cunsurka dareemaya heerkulka wuxuu ku fidaa inta badan dhererka jirka dareenka si uu u bixiyo celceliska aqrinta heerkulka aagga cabbirka heerkulka. Tani waxay ka hortageysaa halista in dareeraha heerkulka dhibic uu seego barta kulul ee deegaanka.
Isku xiraha xayiraadda waxaa si gaar ah loogu talagalay isku xirnaanta degdegga ah, hagaajinta habboon, fiilooyinka degdegga ah ee fiilada dareeraha dareeraha ee koronto-dhaliyaha iyo hagaajinta waxtarka shaqada.
dareeraha heerkulka iskuxiraha degdega ah
Isku xiraha degdega ah ee dareeraha heerkulka Testeck wuxuu si wax ku ool ah uga hor tagi karaa gariirka iyo saameynta wuxuuna ka hortagi karaa goynta uu sababayo jiidayo fiilada.
kala jeexjeexa dareeraha heerkulka sanduuqa
Qalabka sanduuqa iskudhafka iskudhafka Testeck heerkulka dareeraha F12Pt100-200-3220 / F04 waa la kala jari karaa iyadoon la xirin, dareemahana dhaqso ayaa loo kala jari karaa. Qalabka dareeraha heerkulka qaabdhismeedka isgoyska waxaa loo isticmaalaa meelaha cabbiraadda ee heerkulka hawada, dhuumaha biyaha iyo dhuumaha saliidda.
Testeck waa mid ka mid ah kuwa ugu xirfada badan Dareeraha heerkulka dareeraha soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Shiinaha. Fadlan xor ayaad u tahay inaad iibsato tayo sare leh Dareeraha heerkulka dareeraha kaydka halkan oo ka hel xigasho warshaddeena. Sidoo kale, adeeg qaas ah ayaa la heli karaa.